ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင် “ – Grab Love Story
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာလဲ ရေဆေးငါးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကာ သေးကျဉ်းသောခါးနှင့် စွင့်ကားသောတင်သားများနှင့်မို့မောက်
သော ရင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် အတော့်ပင်ကြည်ကောင်း
ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်ကို သူ့အိမ်နောက်ကျောဖက်မှ နေဇော် တစ်ယောက် တိတ်တခိုးစွဲလမ်းနေမိပေပြီ။ ဆရာမနှင့်နောက် အိမ်ဝိုင်းချင်းကပ်နေသဖြင့် ဆရာမနောက်ဖေးထွက်အလာမှာ ဖင်တုန်
ကြီးတွေကို ကပ်ပေါက်ကြားက ချောင်းကြည့်ခဲ့ပြီး မှန်းထုခဲ့ရသည်မှာ
အချိန်ကြာလေပြီ။ အိမ်နီးနားချင်းမို့ မကြာခဏ အလည်သွားဖြစ်သည်။
တစ်နေ့မှာ နေဇော် အကောင်အထည်ဖော်လေပြီ။ ဆရာမ
အိမ်နှင့်ကပ်လျှက်ရှိရာ ဆရာမဆီသို့မယောင်မလည်နှင့် ယခင်ကလိုပဲ အလည်သွားလေတော့သည်။ ဆရာမအိမ်ထဲသို့ဝင်သည်နှင့်
” ဟယ် မောင်နေဇော်…အလည်လာတာလားကွယ့်…လာထိုင်အုံး”
“ဆရာမ ကော်ဖီဖျော်လိုက်အုံးမယ်……”ဧည့်ခန်းမှာ ခဏစောင့်နော်”
ဖင်တုန်ကြီးများမှာ ရမ်းခါလျှက် နေဇော့်ရင်ဘတ်ထဲစွဲကျန်ခဲ့လေသည်။
ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ ဖင်ကြီးကိုကြည့်ရင့် နေဇော်တစ်ယောင် လီးက တောင်လာသည်ဖြစ်ရာ အသာပဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိ၏။ ခဏကြာသော် ဆရာမတင်တင်အောင်တစ်ယောက် ကော်ဖီခွက်လေးကိုင်ခါ
“မောင်နေဇော် အေးဆေးထိုင်ကွယ့် ကော်ဖီလဲသောက်အုံးနော် “ဆရာမရေချိုးလိုက်အုံးမယ်……”
” ဟုတ်…ဆရာမ “
ထို့နောက်ဆရာမတင်တင်အောင် အခန်းထဲသို့ဝင်သွားပြီး ထဘီရင်လျားနှင့် ပြန်ထွက်လာခါ ရေချိုးကန်ဆီသို့သွားလေပြီ။
ဆရာမ၏ ထဘီရင်လျှားကို မြင်လိုက်သည်နှင့် နေဇော့်လီးမှာလဲ
ပို၍ပင်တောင်လာခဲ့ပေပြီ။ ဆရာမ ရေချိုးသည့်နားသို့မယောင်မလည် နှင့် သွားကာ ရေချိုးကန်နားတစ်ဝိုက်စိုက်ထားသော နှင်းဆီများကိုကြည့်လေယောင်ဆောင်ကာ ရေစို၍ထင်းနေသော ဒေါ်တင်တင်အောင်၏တင်သားများကို မျက်စိစူးမတတ်ခိုးကြည့်ရင်း
ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်ကလဲ နေဇော်ကို ရေချိုးရင်း အကဲခတ်နေမိသည်။ဒေါ်တင်တင်အောင်မှာလဲ ခံချင်သလိုလို မိမိစောက်ဖုတ်ထဲက ရေချိုးရင်း ယားကျိကျိဖြစ်နေမိသည်။
“အင်း…ဒီကောင်လေးငါ့ဖင်သားကြီးတွေကို ချောင်းကြည့်နေတာ ငါသိတယ်။ “ငါ ဒီကောင်လေးနဲ့သာ အိမ်ခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်မှာ အလိုးခံလိုက်ရင်တော့ နတ်ပြည်တက်သလိုဖြစ်မှာသေချာတယ်”……
ရေချိုးပြီးတော့ ဆရာမအိမ်ထဲသို့ အဝတ်အစားဝတ်ရန်
ပြန်ဝင်သွားလေ၏ နေဇော်လဲ မယောင်မလည်နှင့်အိမ်ထဲသို့လိုက်ဝင်
ဆရာမတင်တင်အောင်၏ အဝတ်လဲသည့် အခန်းမှာ နေဇော်ထိုင်နေသည့်နေရာနှင့်၁၀ပေသာသာကွာသည်။
အခန်းတခါးမှာ မလုံပဲ ဟ နေသည်မို့ နေဇော် ချောင်းကြည့်နေမိသည်။
နေဇော် မနေနိူင်တော့ပေ ဆရာမအဝတ်လဲသည့်အခန်းကို
အပြေးလေးခြေဖော့သွားခါ အခန်းတံခါးကို လှပ်လိုက်ပြီး ဆရာမကို
နောက်မှ အတင်းပဲ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး
“ဟင် အို အို မောင်နေဇော် ဆရာမကိုလွှတ်ကွာ”
“မလွှတ်ဘူး ဆရာမရယ်”” ပြောစရာရှိလို့ပါနော် မနေနိူင်တော့လို့ပါ။
“အခုမှ ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် ကြိတ်ပျော်နေမိပေပြီ
“ဘာပြောမှာလဲ မောင်နေဇော် ပြောလေ”
“ဟွင်း……သိသားပဲ ကောင်စုတ်ကလေး စောစောကတည်းက ရေချိုးကန်နားလာပြီး သူများကိုချောင်းကြည့်နေတာ…သိပါ့။”
နေဇော်တစ်ယောက် နောက်မှသိုင်းဖက်ရင်း ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ ကြီးမားစွံ့ကားလှသော ဖင်သားကြီးအား လီးနှင့်ထောက်မိပြီး ရင်ဘတ်ထဲတစ်ဒိုင်းဒိုင်းနှင့်ကြိတ်ပျော်နေ လေပေပြီ။
“မောင်နေဇော် ခဏနေအုံးကွာ ဆရာမ ခန္ဓာကိုယ်မွှေးသွားအောင်
ဆရာမတင်တင်အောင်တစ်ယောက် ကာနေရှင်းလေး လိမ်းလိုက်ပြီးနောက်???……
သူအိပ်နေကျ အိပ်ခန်းထဲသို့အတူသွားပြီး…ဝယ်ထားသည်မှာ ၃ရက်လောက်သာရှိသေးသော ဒန့်လော စပရိန်မွှေ့ယာပေါ်သို့
ဒေါ်တင်တင်အောင်လဲ ခံချင်လှပြီဖြစ်ရာ အချိန်မဆွဲပဲ
ထဘီကိုချွတ်လိုက်ပြီးနောက် ဘော်လီကိုလဲ ချွတ်လိုက်လေ၏။
နေဇော့်မှာလဲ ပုဆိုးနှင့်အိကျီ င်္ကို အမြန်ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီးတော့ ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ စွံ့ကားဖွေးဖြူပြီး နူးညံ့လှသော တင်သားကြီးများ ကို အားရပါရဆုပ်နှယ်ကာ ကြီးမားဖွေးဥပြီး တင်းလုံးကာနေသော နိူ့အုံကြီးနှစ်လုံးကို လက်ဖြင့်အားရပါးရ ဆုပ်နှိပ်နှယ်ပေးလိုက်ကာ
နိူ့စို့ရင်းနှင့်ဖင်တုန်ကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားရပါးရ
ဆုပ်နှယ်ပေးကာ လီးကြီးနှင့်လဲ ဖင်တုန်ကြီးများကို ထိုးပေးဆွပေးပြီး
အားရပါးရ ချစ်မိနေလေတော့သည်။ ထို့ပြင် ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်၏ နှုတ်ခမ်းညိုရစ်ရစ်လေးအား ပြတ်ထွက်
လုမတတ် စုပ်နမ်းပေးလိုက်သည့်အခါ ဆရာမတစ်ယောက်
စောက်ဖုတ်ထိပ်ဝ စောက်စိအောက်မှ ကာမအရည်ကြည်လေးများ
စပြီး ထွက်လို့လာကာ မျက်လုံးများလဲ မဖွင့်ချင်တော့အောင် ခံစားနေရ
ထို့နောက် ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်ကို မွေ့ရာပေါ်သို့အသာ ပွေ့လှဲလိုက်ပြီး ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ ထုထပ်ညိုရစ်သော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကိုပြတ်ထွက်လုမတတ် ထပ်မံပြီး အားရပါးရ ပါးစပ်ချင်း စုပ်နမ်းလေတော့သည်။နေဇော်မှ စုပ်နမ်းသည်ကို အားမရတော့သည့်
ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် နေဇော်နှုတ်ခမ်းကိုလဲ အားရပါးရ
လျှာကြီးနှင့်ထုတ်ကာ ပြန်လျှက်ပေးရသည့်မှာလဲ အမောပါပေ။
” ပွတ်စ်…ရှလွတ်စ်…အင့်…အား…အာ့ ပွတ်စ် ရှလွတ်စ်……”
ထို့နောက် ဆရာမ၏တင်သားကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်ခါဆွဲယူလိုက်ပြီး
စောက်ဖုတ်ထိပ်နား သပြေသီးမှည့်ရောင်စောက်စိကြီးပြူးထွက်နေသော နေရာကို ကြီးမှားတုတ်ခိုင်သော သပြေသီးမှည့်ရောင် လီးထိပ် ဒစ်ကားကားကြီးဖြင့် ဖိပြီးပွတ်ဆွဲပေးနေလေတော့သည်။ အချိန်၁၅မိနစ်
ကြာကြာလောက် မလိုးသေးပဲ ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ ဇီးစေ့သာသာ
နီညိုရောင် စောက်စိအား အသားကုန် ဒစ်ဖူးဖြင့် ဆွပေးလိုက်သည့်အခါ ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် ယောင်ပြီးနှုတ်ခမ်းများကိုက်ခါ ဖင်တုံကြီးကြွတက်သွားပါတော့သည်။
ထိုသို့စောက်စိကြီးကို လီးထိပ်နှင့်ထိုးဆွပြီးတော့ ခဏ ၁၅မိနစ်အကြာမဇာတော့ ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်၏ မို့မောက် ပြီး စောက်ရည်များရွှဲစိုနေသည့် စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလှလှကြီး၏ စောက်ခေါင်း အပေါက်ဝလေးအား နေဇော်၏ကြီးမားလှပြီး
တုတ်ညိုနေသောသပြေသီးမှည့်ရောင် လီးဒစ်ထ်ိပ်ကြီးနှင့် အားရပါးရ
“အား…အားးး အဟင့် ဟင့် ကျွတ်စ်…ကျွတ်စ်…မောင် မောင်နေဇော်…” အမလေး အင့် ဟင့် အင်း ဟင်း ဟင်း အိုး အာ့ အား
“ဆရာမ နာတယ်ကွာ အင့် ဟင့် ဟင့်……”
နေဇော်၏နီညိုရောင် ဒစ်ကြီးမှာဒေါ်တင်တင်အောင်၏ စောက်ဖုတ်
အတွင်းသားစိုင်များဆီသို့ ထိုးခွဲဝင်ရောင်သွားသည်နှင့် နာကျင်စွာ ဒေါ်တင်တင်အောင့်မှာ နေဇော့်ကို အတင်းဖက်ထားမိပြန်သည်။
နေဇော် မရတော့ပေ အမြဲတမ်း အိမ်နောက်ဖေးမှာကတည်းက ခဏခဏချောင်းကြည့်ရင်း မှန်းထုခဲ့ရသည်မိူ့ အခုလိုကြုံတုန်းကို အားရပါးရ တရက်စပ် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးနေမိသည်
” ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ပွတ်ကျိ ဖွတ် ပွတ်စ် ပြွတ် ဘွတ် ဖွတ်……
အား အ……အာ အာ့ မောင်……မောင်နေဇော် ဆ ဆရာမ အရမ်းကောင်းလာပြီကွာ အင့် ဟင့် ဟင့် အာ့……အ
အ အမလေး ရှီးစ် အို အိုကွာ “
မောင်နေဇော် မင်း မင်း အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ အဟင့် ဟင့်…”
“အဟင့် ဟင့် ဟင့် အာ့……အာ”
“အင့် အား အား……ဟင့် ဟင့်………။
၁၅မိနစ်ခန့်ကြာသော်နေဇော်၏မနားတမ်း တရပ်စပ် ဆောင့်လိုးချက်တွေအောက်မှာ ဒေါ်တင်တင်အောင် အားမလိုအားမရဖြစ်ခါ ဖင်သားကြီးများကို ပြန်ကော့ပေးခါ တတ်သမျ မှတ်သမျှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆောင့်ပြီးလိုးကောင်းစေရန်ပြန်လည်လုပ်ပေးရ သည်မှာလဲ အမောနိူင်ပါပေ……။
ထိုနောက် ပုံစံပြောင်းခါ ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက်
နေဇော်အပေါ်မှ ပက်လက်လှန်တက် ဆောင့်အလိုးခံလိုက်လေသည်။
ထိုစဉ် နေဇော်မှ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ပစ်ဆောင့်လိုးရင်း ဒေါ်တင်တင်အောင်၏ပြူးထွက်နေသော စောက်စိကြီးကို နေဇော်၏ လက်မနှင့်ဖိချေပေးလိုက်သောအခါ ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် နတ်ပူးသကဲ့သို့ ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ တဟင်းဟင်းနှင့် ကော့တက်သွားပြီး နတ်ပြည်ရောက်သကဲ့သို့
ဖြစ်သွားကာ စောက်စိအောက်မှ စောက်ရည်များ ဗျစ်ကနဲ ပန်းထွက်သွားလေတော့သည်။
“အားး အားးးးး အမလေး မောင်နေဇော်ရယ် ဘယ်လိုတွေများ လုပ်တတ်ပါလိမ့် အဟင့်ဟင့်” “ဆရာမ အဖုတ်ထဲ ဆိမ့်အိမ့်နေအောင် တအားကောင်းလိုက်တာမောင်နေဇော်ရယ်” အား အာ အဟင့် ဟင့် ဟင့် အ။
ထို့နောက် နေဇော်တစ်ယောက် “ဆ..ဆရာမ ကျွန်တော်တို့ ထပ်ပြီးပုံပြောင်းလိုးကြမယ်နော် ခဏ”
“အင်း မောင်လေး ပြောင်းလေ ဆရာမဘယ်လိုလုပ်ပေးရမာလဲ မောင်နေဇော်”……
” ဟုတ်ဆရာမ ဒါဆို ကျွန်တော့်အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးနော်
ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင် နေဇော့်အပေါ်မှနေ၍ မီးကုန်ယမ်းကုန် တက်ဆောင့် အလိုးခံပေးလိုက်တော့သည်…
“ဆရာမ “ဆရာမပြန်ပီးတော့ အပေါ်ကနေ ဆောင့်လိုးခံပေးပါအုံး…
” နှစ်ယောက်လုံး အတူတူဆောင့်လိုးကြတာပေါ့……။”
“ဒါမှ ကျွန်တော်ရော ဆရာမရောပါ လိုးရတာ အီဆိမ့်အိမ့်နေမှာဗျာ”
ပက်လက်အနေအထားဆောင့်လိုးနေသော နေဇော့်အပေါ်မှ ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက်တက်ဆောင့်လိုးခံနေရင်း
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆောင့်လိုးရတာကောင်းစေရန် ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် သူမ၏ဖင်သားကြီးများကို
နေဇော်နှင့်ဒေါ်တင်တင်အောင်၏အိုးကြီးမှာ ထိထိမိမိဖြစ်ကာ မီးကုန်ယမ်းကုန် ပိုဆောင့်လိုးကောင်းနေပေတော့သည်။ နေဇော့်မှာ
ဆေးအစွမ်းကြောင့် တစ်နာရီခန့်မရပ်မနား ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးလိုက်
သည့်အတွက် ဒေါ်တင်တင်အောင်မှာလဲ မိမိစောက်ဖုတ်အတွင်းသား များမှာ ဆိမ့်အိမ့်နေကာ အသဲထဲထိ ခိုက်နေတော့သည်။
ထိုအပြင် ဒေါ်တင်တင်အောင်တစ်ယောက် ခံရတာကြာလာပြီး
နေဇော်၏ လီးကြီးအား မိမိစောက်ဖုတ်အတွင်းသားများနှင့် ဖင်ကိုရှုံ့ခါ
ဆွဲညှစ်လိုက်လေတော့သည်။ ထိုအချိန်မှာတော့ နေဇော်တစ်ယောက်
“အား အ အား ဆရာမ ကျွန်တော်မခံစားနိူင်တော့ဘူး ဆရာမညှစ်တာ အရမ်းကောင်းလာပြီ
“တအားကောင်းတယ် အာ့ အ အား အား အင့်…”
” ဖွတ်ပွတ် ပလွတ်………ပွတ်စ် အင့် ဟင့်………အို အ အား”
“အဟင့် အို အင့် အင့်……” “အား အ အာ ဟင့် ဟင့်အင့်” “အဟင့်ဟင့်…”ဖွတ် ပွတ် ဖတ် ဖတ်…”
“အ အ ဆ ဆရာမ ကျွန်တော် ပြီးတော့မယ်ဗျ။ အ အား အ အ
ဟင် မောင် မောင်နေဇာ်” တို့……တို့…လဲပြီးတော့မယ် မောင်နေဇော်…”
“အ အာ့ အား အို အို အဟင့် ဟင့် အင့်
အာ့ အာ့ ဟင့် အဟင့် အင့် အဟင့် အမလေး ဗျစ် ဗျစ်!!
အ အားးးးအဟငွ့ !
“ဆောင့် ဆောင့် မောင်နေဇော် ” ” ဆရာမရဲ့စောက်ဖုတ်ကို “မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်လိုးလိုက်တော့”………
ဖွတ် ဖတ် အား ဟာ အာ့ အင့် အဟင့်ဟင့် အား အား
ထို့နောက် နေဇော်လဲ လီးထိပ်တစ်လျှောက် ကျဉ်တက်လာပြီး
ဆရာမဒေါ်တင်တင်အောင်လဲ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်စိထိ တစ်လျှောက်လုံးပင် ဆိမ့်အိမ့်ကျဉ်တက်လာခါ.……………
“အား အကျွန်တော့်သုတ်ရေတွေ ဆရာမစောက်ဖုတ်ထဲ
ထွက်သွားပြီ။ အင့် ဟင့် တို့လဲထွက်တော့မယ် ပြီးပြီး ပြီးပြီ
“အားးးး အင့် အမလေး အဟင့် ဟင့် ဟင့်……။”
ထို့နောက် နေဇော်နှင့်ဆရာမတင်တင်အောင်တို့ ကာမပန်းတိုင်သို့ အတူအရောက်လှမ်းလိုက်ကြပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး
မလွတ်တမ်း တင်းကျပ်စွာဖက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားကြလေတော့သည်… ………………………။